Kooxaha Premier Oo Laga Doonayo Inay Iska Bixiyaan £340 Milyan Oo Hore Loo Siiyey, Xattaa Haddii Horyaalku Bilowdo - Gool24.Net
Kooxaha Premier Oo Laga Doonayo Inay Iska Bixiyaan £340 Milyan Oo Hore Loo Siiyey, Xattaa Haddii Horyaalku Bilowdo
12/05/2020 Abdiwahab A. Abeye
Kooxaha horyaalka Premier League ayaa lagu wargeliyey inay iska soo celiyaan lacag lagu qiyaasay £340 milyan oo hore loogu siiyey ciyaaraha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah ee telefishannada laga baahiyo.
20ka kooxood ayaa sida uu dhigayay heshiiska xuquuqda baahinta ee xilli ciyaareedkan waxa hore loo siiyey lacago horumarin ah oo Sky Sports iyo BT Sports oo baahinta maxalliga ah haystay iyokuwo kale oo uu ku jiro beIN Sports oo dibedda u baahiya.
Lama sheegin telefishannada leh lacagtan lacagta kooxaha laga doonayo iyo sida ay u kala yeelanayaan, laakiin BBC Sports ayaa maanta baahisay in xattaa haddii uu horyaalku bilaabmo laga rabo naadiyada Premier League inay soo celiyaan £340 milyan oo Gini.
Horyaalka Premier League ayaa saddex sannadood oo heshiis ah oo uu kula jiro telefishannada, waxa uu ku helayaa lacag dhan £9.2 bilyan Gini, waxaana xili ciyaareedka koowaad uu ahaa kan hadda socda ee dhibaatooyinka fayrasku khalkhalka geliyeen.
Heshiiska oo soconaya illaa 2022, waxa sannad walba qayb ahaan loo siin doonaa lacagta, laakiin waxay lumin doonaan illaa £1 bilyan haddii ciyaaraha dib loo bilaabayo ay gebi ahaantoodba istaagaan oo xili ciyaareedka la kansalo.
Madaxa Premier League ee Richard Masters ayaa hore u saadaaliyey in ugu yaraan £1 bilyan ay kooxuhu khasaari doonaan xili ciyaareedka 2019/20 haddii la dhamaystiri kari waayo, balse kulankii shalay ee maamulka EPL iyo koxoaha saamilayda ah ayaa waxa la iskula qaatay in la dhamaystiro xili ciyaareedka.
Si kastaba, kooxaha oo dhaqaale la’aan ka cabanaya, isla markaana bilihii March, April iyo May aan wax dakhli ah soo gelin, dhibaatada dhaqaaluhuna sii jiri doonto oo muddo aan la garanayn ay taageereyaal la’aan ahaan doonaan, ayay mashaqo ku tahay in hadda loo raaco £340 milyan oo hore loo siiyey oo laga doonayo inay iska soo celiyaan.